सार्वजनिक गाडिमा हिडदा मेरो स्त,न कसैले छुन्छ भने कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? – सावित्री सुवेदी – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १०, २०७८ समय: १:२९:३५
पेटिकोट आन्दोलन बाट बजारमा चर्चा बटुलेकी जय नारी भन्ने नारा लगाउदै समाजमा उत्पीडनमा परेका नारिहरुलाई सहयोग गर्दै आएकी महिला अधिकारकर्मी सुबेदिको एउटा भिडियो क्लिप भाइरल भएको छ ।
नेपाल आज न्युज डटकम बाट लिगिएको एक अन्तर्वार्तामा सावित्रीले म घर जादा कुनै सार्वजनिक सवारिमा गए भने त्यहाको भिडले मेरो स्तन छोइयो भने कारबाही गर्ने कि नाइ ? भनेर प्रश्न वाचक चिन्ह उठाएकी छन ।उनको यश प्रश्नलाई कतिले खिल्ली उडाएका छन भने कतिले जवाफको अपेक्षा राखेका छन । सुबेदिले यस्तै कुरा गर्दा खाली चर्चामा आउने गर्छिन । पुरुष प्रतिको व्यङ्ग्य , नारी प्रतिको उच्च आदारले गर्दा उनले बेला बेलामा आफ्ना कुरा राख्दै आउछिन ।उनले भने यश विषयमा खासै आफ्नो स्पस्टिकरण दिएकी छैनन ।
Last Updated on: July 13th, 2021 at 12:40 am
१३८१ पटक हेरिएको